Wararka Dibada | Radio Alfurqaan | Xarunta Wararka Sugan | Page 40
Halkaan ka dhegeyso warka duhurnimo 28-01-1439 hijri
Taliyaha Ciiidamada Xukuumadda Iiraan oo Booqasho ku yimid Suuriya.
Gaari Ciidamada Shisheeye Looga Gubay Shabeellaha Hoose.
Xillibaan katirsan Baarlamaanka DF Oo Dhintay.
Dhagayso Xubinta Faa’iido 6.
Shacabka Maraykanka oo bilabaabay iney dacwad kusoo rogaan maamulka Aala-Sucuud.
Iyadoo dhawaan aqalka Congreska Maraykanka uu ka hor yimid Viito kasoo baxay Obama oo uu ku diidanaa in Maamulka Aala-Sucuud lagu so oogo dacwad ku salleysan iney maalgeliyeen weeraradii 11 Septembar ee Maraykanka lagu dumiyay ayaa waxaa Shacabka Maraykanku si toos ah u bilaabeen iney dacweeyaan Xukuumadda Aala-Sucuud. Haweenay Ameerikaan ah oo ninkeeda oo katirsanaa Saraakiisha Ciidanka Maraykanka ku dhintay ...	Read More »
Iyadoo dhawaan magaalada Talla’biib ee caasimadda maamulka Yahuudda uu ku geeriyooday madaxweynihii hore ee Yahuudda kana mid ah aas-aasyaashii dowladda gacan ku rimiska ah ee xooga ku heysta dhulka Muslimiinta Filastiin ee Shimon Price ayaa waxaa soo baxaya warar xoog badan oo sheegaya in dowlado Carbeed ay ka qayb gali doonaan aaska ninkaas. Warbaahinta Yahuudda noocyadooda kala duwan ayaa aad ...	Read More »
Baarlamaanka Swizerland oo mamnuucay Xirashada Niqaabka ay xirtaan Gabdhaha Muslimaadka ah.
Kulan ballaaran oo maalintii Talaadada uu yeeshay baarlamaanka Swizerland ayaa waxaa kasoo baxay go’aan lagu xanibayo qaadashada Indha Shareerka ama Niqaabka ay xirtaan gabdhaha Muslimaadka ah. Fikirka joojinta xirashada Niqaabka ayaa waxaa soo jeediyay xillibaan lagu magacaabo Falter Vobman oo kasocoda Xisbiga shacabka ee dalkaas, waxaana xisbigan uu caan ku yahay nacaybka fog uu u qabo Muslimiinta. Go’aankan ayaa guud ...	Read More »
Madaxweynihii hore ee Yahuudda oo geeriyooday.
Sida ay baahisay wakaaladda rasmiga ah ee ku hadasha afka maamulka Yahuudda, waxaa gebi ahaanba geeriyooday madaxweynihii hore ee maamulka Yahudda Shamcoon Biiris. Wakaaladda oo soo xiganeysa Drka gaarka ah ee daawaynayay Biiris ayaa sheegtay inuu ku geeriyooday magaalada Talla’biib ee maamulka Yahuudda, waxaana uu da’ ahaan jiray 93 sano. Ehalada ninkan geeriyooday ayaa diiday bixinta faafaahin intaas kabadan, waxaana ...	Read More »
Sarkaal sare oo katirsan Shiicada ka dagaalameysa Suuriya oo lagu dilay magaalada Xalab.
Inkastoo duqeymo xoogan oo waali ah ka dhacayaan magaalada Xalab islamarkaana ay magaaladu qarka u saarantahay iney gasho xaalad Banii aadamnimo oo aad u dhiban ayaa hadana dhanka kale waxaa soconaya dhiig bixinta ku soconeysa malleeshiyaadka Shiicada noocyadooda kala duwan ee dagaalka kaga jira Xalab. Warbaahinta Shiicada Iiraan ayaa xaqiijisay dhimashada Hogaamiyihii guud ee kooxda shiiciga ah ee la magac ...	Read More »
Swidan oo dad lagu dhaawacay.
Afar Ruux ayaa ku dhaawacantay oo mid kamid ah dhaawiciisu halis yahay, kadib markii rag hubeysan ay weerar ku qaadeen dad ku sugnaa magaalada Maalmo oo kamid ah magaalooyinka ugu weyn ee dhaca koonfurta dalka Swidan. Sida ay sheegayaan rag hubeysan oo watay Mooto dheereysa ayaa rasaas ku furay dad ku sugnaa hareeraha laamiga, waxaana durba ay goobta ku dhaawaceen ...	Read More »
Wararka ka imaanaya dalka Urdun ayaa sheegaya in qof hubeysan uu toogtay Qoraa caan ah oo katirsan Cilmaaniyiinta dalka Urdun, xilli uu marayay afaafka hore ee qasriga cadaalada ee magaalada Cummaan caasimadda dalka Urdun. Ninka la dilay oo caan ku ahaa ku jees jeesida dadka Muslimiinta ah si gaar ah Mujaahidiinta ayaa waxaa lagu magacaabaa Naahid Xatar, wuxuuna dhawaan baahiyay ...	Read More »
Haweenay Muslimad ah oo lagu toogtay magaalada Paaris ee Faransiiska.
Wararka ka imaanaya dalka Faransiiska ayaa sheegaya in haweenay Muslimad ah islamarkaana xijaaban lagu dilay deegaan hoos yimaada magaalada Paariis oo ah caasimadda dalka Faransiiska. Sida ay sheegeen dad ku sugnaa magaalada uu ka dhacay dilka oo lagu magacaabo Banatan, qof hubeysan islamarkaana kaxeysanayay mootada dheereysa ayaa toogtay gabadhan Muslimadda oo da’ ahaan jirta 30 sano, isagoona markaas si nabad ...	Read More »
Weerar khasaare dhaliyay oo ka dhacay dalka Maraykanka.
Waaberigii maanta oo Sabti ah waxaa weerar khasaare dhaliyay lagu qaaday Xarun weyn oo laga dukaameysto kuna taalla Gobolka Washington ee dalka Maraykanka. Qof hubeysan ayaa gudaha u galay xaruntan Ganacsi oo ku taalla degmada Burlington ee dhacda wuqooyi galbeed magaalada Washington, waxaana uu halkaas ku dilay 4 Ruux. Ciidamada Booliiska Maraykanka oo gaabta gaaray ayaa xaqiijiyay inuu baxsaday ruuxa ...	Read More »
Iyadoo ay cid waliba u cadahay dagaalka fog ee maamulka Aala-Sucuud kula jiro dadka Muslimiinta ah ee kasoo horjeeda siyaasadaha ku dhisn Gumeysiga ee Reer galbeedku la rabaan dhulalka Islaamka ayaa hadana waxaa maamulkaas intaas u dheer inanu xitaa ka fakan gabdhaha Muslimaadka ee lagu tiriyo dadka Biramageedada ah. Xabsiyada maamulka Aala-Sucuud waxaa ku jira tobanaan Gabdho Muslimaad ah, kuwaas ...	Read More »